Samachar Batika || News from Nepal » बुधबारका दिन गर्न गरीने पुजा/आराधाना र ब्रतविधि
बुधबारका दिन गर्न गरीने पुजा/आराधाना र ब्रतविधि
यदि तपाईको घरमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बुध ग्रहलाई पुजा गर्नुहोस् । यसले समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यदि यस्तो समस्याहरु आएका छन् भने त्यसको प्रभावलाई विभिन्न उपायहरु अपनाएर हटाउन सकिन्छ । साथै बुधबार विष्णु भगवानको पुजा आरधना गर्नाले विद्या, धन तथा व्यापारिक उन्नतिको साथै बुढेसकाबाट टाढा रहन सकिन्छ।
१ बुधबारको दिन हरियाली घाँसपात खोजेर वस्तुभाउलाई खुवाउने
२. बुध ग्रहको अशुभफललाई शुभमा परिवर्तन गर्न गणेशको पुजा गर्ने ।
७. .बुध ग्रहलाई प्रसन्न बनाउनको लागि भगवतीको पुजा गर्ने ।
त्यसै गरी बुधवार गणेश पनी गरीन्छ हेरौ.. पुजा बिधि
बिहान स्नान गरे पश्चात तांबको पात्रमा गणेश जी को मूर्ति स्थापित गर्नुहोस्। पात्रलाइ राम्रो संग साफ गर्नुहोस् र पूजाको समय मुख पूर्व दिशामा राख्नुहोस। सफा आसनमा बस्नुहोस् र भगवान गणेशलाई फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन ले पूजा गरौ। गणपतिको पूजामा दुबो अर्पित गर्न न भुलौ यो अत्‍यंत शुभ मानिन्छ। पूजा पूर्ण गरेर गणेशलाई मोदकको भोग लगाउ।
अंतमा भगवानको ध्यान गर्दै यो मंत्र को १०८ चोटि मनमा जाप गरौ ॐ गणपतये नमः। दिन भरि व्रत राखे पछि बेलुका पनि पूजा अवश्य गर्नु पर्दछ।। यो दिन भागवत महापुराणको पाठ गर्नु पनि शुभ मानिन्छ। बुधवारको पूजामा हरियो रंगको अत्‍यंत महत्‍व हुन्छ यो दिन हरियो रंग को फल, फूल और वस्त्र बस्त्र दान गर्नु शुभ मानिन्छ।
यस कुराको पनि राखौ ध्यान
यस दिन पूजाको समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्त्रोतको पाठ पनि गर्नु उत्तम मानिएको छ। साथै ब्राह्मणलाइ भोजन र दक्षिणा दिदा पनि भगवान प्रसन्न हुन्छन। यस दिन उपवास गरेर बेलुकाको समय भोजन ग्रहण गरौ।
सांय कालमा पनि व्रतको पारण गर्नु पूर्व गणेश चतुर्थी कथा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्रनामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि को पाठ गरौ। अन्तमा संकटनाशन गणेश स्तोत्र को पाठ गरेर श्री गणेश को आरती गरौ र ‘ॐ गणेशाय नम:’ मंत्र को जाप बाट पूजा को समापन गरौ।
प्रकाशित मिति १४ माघ २०७६, मंगलवार १७:३१